Welthungerhilfe: Welthungerhilfe oo ku-sugan Geeska Afrika – YarayntaGaajada
Beeraha adduunka waxay soo saartaa cunno ku filan qof kasta, laakiin waxaa loo qeybiyaa si aan sinnayn. Welthungerhilfe wuxuu dhigayaa xuquuqdan aadamiga ah ee cuntada ee udhexeysa wax qabadkeeda sida aan uga shaqeynayno himilooyinka horumarka Qaramada Midoobay ee waara ee 'Zero Hunger marka la gaaro 2030'.
Asbaabta keena gaajada
Gaajadu waa, tan oo dhan, cawaaqib xumo saboolnimo. Qoysaskaas oo haysta lacag aan ku filnayn cunnada ma awoodaan in ay daryeelaan caafimaadkooda mana maal gashadaan waxbarashada carruurtooda.
Gaajada ayaa inta badan ku baahsan gobollada fog ee adduunka halkaas oo dadku ay caadi ahaan ka soo jiitaan cunnadooda iyo noloshooda deegaanka dabiiciga ah. Sugnaanta cunno ee bulshooyinka reer miyiga ah waxaa ku hoos jira halista dagaalada hubaysan, aafooyinka dabiiciga ah iyo saameynta isbedelka cimilada, sida roobka dheer ama abaarta.
Wadamada leh gaajo aad u sarreysa ayaa waliba inta badan la kulma xaalado ganacsi oo aan caddaalad ahayn. Baahida sare ee suuqa adduunka ee cuntada iyo waxsoosaarka cayriin ee beeraha ayaa qatar ku ah nolosha iyo nafaqada ee qoysaska reer miyiga ah, kuwaas oo qaar badan oo kamid ahi aan awoodin inay cunaan cunto caafimaad leh.
Sinaan la’aanta ka jirta waddamadan waxay daciifineysaa heerka muwaadiniinta ugu saboolsan bulshada iyo xaqqa loo leeyahay in la maqlo, ugu dambeyntiina waxay sii xumeysaa gaajada. Marka tan laga eego, maamul xumo iyo musuqmaasuq ayaa horseeda caqabado horumarka sida boobka dhulka.
Caaqiibada ay leedahay gaajadu
Waxaa jira in kabadan 800 milyan oo dad ah oo la silicaya gaajo aduunyada halka kudhawaad labo bilyan ay la'yihiin fiitamiinno iyo macdano muhiim ah - nooc nafaqo daro ah oo la yiraahdo gaajo qarsoon.Gaajada iyo nafaqo-xumada ayaa xannibay horumarka guud ee gobollada, oo leh saameyn weyn oo ku saabsan hufnaanta iyo caafimaadka bulshada.Kuwa ugu nugul waa dhibbanayaasha ugu badan ee gaajada, badanaa carruurta. Sinnaanta qaabdhismeedka bulshada dhexdeeda, haweenku waxay haystaan fursad yar waxbarasho iyo fursado ay ku helaan nolol-maalmeed. Intooda badan ma haystaan ilo ay iyagu leeyihiin oo waxay si joogto ah ula dagaallamaan culeyska laba jibaaran ee shaqada beeraha iyo barbaarinta carruurta iyadoo aqoon yarida ku saabsan nafaqada iyo nadaafadda ay kordhineyso khatarta caafimaadka carruurta.
Helitaan cunto ku filan oo nafaqo leh ayaa muhiim u ah haweenka uurka leh, hooyooyinka nuujinaya, iyo carruurta 1000-ka maalmood ee ugu horreeya noloshooda.Yaraanta nafaqada waxay daciifineysaa nidaamka difaaca ee carruurta waxayna awoodaa, iyada oo ay weheliso nafaqo daro guud, waxay u horseedi kartaa curyaannimo jireed iyo horumarka maskaxda ee xaddidan inta harsan noloshooda.
La dagaallanka sababaha
Istaraatiijiyadda Welthungerhilfe waxay ku wajahan tahay sidii loo heli lahaa nabadgelyo raashin iyo nafaqo leh oo loogu talagalay kuwa ugu nugul. Wadashaqayn dhaw oo lala yeesho bulshada maxalliga ah iyo ururada iskaashatada ah, mashruucyadeenu waxay wax ka qabanayaan fashilka ku dhaca hababka cuntada iyo dhaqaalaha si loo cirib tiro gaajo daran, raagtay iyo gaajo qarsoon. Si loo gaaro himiladaan waxaan lashaqeyneynaa habab ay kamid yihiin beero gaar ah: kor u qaadida hababka beero abuurka iyo dalagyada ku habboon duruufaha maxalliga ah iyo dhaqanka, xoojinta adkeysiga: u diyaarinta bulshooyinka dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka si loo yareeyo saameyntooda, loona xoojiyo bulshada rayidka: xoojinta codadka ee dadka la faquuqo si ay u dalbadaan xuquuqdooda.
Hababka Latacaalida macluusha adduunka
Ku dhowaad dhamaadka gaajada
Tallaabooyin muhiim ah ayaa loo qaaday sidii loo ciribtiri lahaa gaajada adduun weynaha inta aan ka hadlayno sababihiisa.Laba boqol oo sano kahor tobankiiba sagaal sagaal ayaa ku noolaa saboolnimo buuxda; maanta waa mid tobankiiba mid ah.Tilmaanta sanadlaha ah ee 'Welthungerhilfe' ee Gaajada Adduunka ayaa muujineysa hoos u dhac ku yimid heerarka gaajada dhammaan waddammada la sahamiyey 15-kii sano ee la soo dhaafay.Tusaale ahaan Afrika, waxaa ku dhacay celcelis ahaan 30 boqolkiiba. Ugu dambeyntiina, maadaama Welthungerhilfe la aasaasay in ka badan 50 sano ka hor, dhimashada carruurta ku nool Global South waxay hoos uga dhacday boqolkiiba 20 wax ka yar 5 boqolkiiba.